Hello world! – Tourde Myanmar
Posted By : darle/	1609 1
💕 ချစ်ခြင်းများစွာဖြင့် ဥ ရောပ ရဲ့ လာဗန်ဒါဆီသို့ 💕
အီတလီ- မိုနာကို- နိစ်- ပြင်သစ်ခရီးစဉ် ( ၁၁ ညအိပ် ၁၂ ရက် )
19 – 30 July 🗓 – 2019 ► တစ်ဦးလျှင်💰 USD 3490 /-
ငါတို့ ခရီးထွက်ဖို့ အဆင်သင့် ဖြစ်ပြီလား .........💕.
လာဗန်ဒါ ခရမ်းပြာတွေဆီ....... 💕
သင် အဆင်သင့်ဖြစ်လျှင် ကျွန်ုပ်ဆီ လာခဲ့ပါ.......💕
နောက် . . . ခရမ်းရောင် ဝတ်ရုံကို တစ်ပါတည်း ယူလာခဲ့ပါ ..💕
👨💻👩💻ခရီးစဉ် အသေးစိတ်ကို Viber, Facebook ,Chat Box တို့မှလည်း ဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
တိုးဒီ နဲ့ GO ပြီ။
ပြည်ပခရီးလိုင်စင် အမှတ် - ပခ-၀၀၁၂
အမှတ်(၁၀၉)၊ ပထမထပ်၊ စဉ့်အိုးတန်းလမ်း၊
လသာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
🛎📞☎ ဖုန်း - 378503, 378127 , 250734, 371105 , 373270, 381213
📱📱📱 Viber / HP : 09779999147 ( Ma Wai Kyaw )
09779999146 , 09-777 2500 50 ... See MoreSee Less
ကဆုန်လပြည့်နေ့ ရုံးပိတ်ရက် အခါသမယမှာ ကျန်းမာချမ်းသာပြီး ကိုယ်စိတ်နှဖြာလန်းဆန်းကြွယ်ဝပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းပြုလိုက်ပါတယ်ရှင့်။
#tourdemyanmar #fullmoondayofkasong ... See MoreSee Less
🇬🇧 အင်္ဂလန်-စကော့တလန်- ဝေးလ် ခရီးစဉ်🇬🇧
13-22 July 2019 - USD - 3690 ( ၉ ညအိပ်/ ၁၀ ရက်)
ဒီပြည်နယ်(၃)ခု ပေါင်းပြီး Great Britain (သို့) ဘိလပ်ရယ်လို့ မြန်မာတွေ သိကြတဲ့ အင်္ဂလန်ပြည်ကြီးဟာ နေမဝင်အင်ပါယာရယ်လို့ တချိန်တခါက မော်ကြွားခဲ့ပေမယ့် ခုတော့လည်း အရင်လို မတောက်ပတော့။
ဒါပေမယ့် အိုမင်းရင့်ရော်တယ် မဆိုသာသလို အိနြေ္ဒကြီးစွာ ရင့်ကျက်လှပနေဆဲပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အစဉ်အလာကြီးမာခဲ့တဲ့ နန်းဟန်အပြည့်နဲ့ "ဝင်ဆာရဲတိုက်ကြီး" ကလည်း အင်္ဂလန်ရဲ့ဂုဏ်ကို ထိမ်းသိမ်းဆဲ။ "Big Ben" နာရီစင်ကြီးကလည်း လန်ဒန်ရဲ့ ကျက်သရေကို တင့်တယ်စေမြဲ၊ "Tower Bridge" ကလည်း သိမ်းမြစ်ကြီးကို ကြီးကျယ်ခမ်းနာစေမြဲ၊ ထောင်စုဘီးကြီးကလည်း လန်ဒန်ကို အပေါ်စီးကနေ ပြုံးကြည့်နေနိုင်ဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် အင်္ဂလန်ရယ်လို့ ယနေ့ထိတိုင် ကမ္ဘာအလယ်မှာ အိနြေ္ဒကြွယ်နေနိုင်ဆဲပါ။ ကိုယ်တွေက တချိန်တခါက သူ့လက်အောက်မှာ နေခဲ့ရလေတော့ ဒီနေ့ ဒီအချိန်မှာ ငွေကြေးတတ်နိုင်လို့ အလည်လာတဲ့ တိုးရစ်လိုမျိုး သွားရတော့ ဘဝင်လေဟပ်မိတယ်လေ။
မြန်မာရဲ့ ကမ္ဘာလှည့်တိုးရစ်ကြီးတွေကို အင်္ဂလန်က လက်ကမ်းလို့ကြိုရတဲ့ အခြေအနေတစ်ခုက ဘယ်လောက်များ ဘဝင်ခိုက်စရာ ကောင်းလိုက်ပါသလဲ... ဒါကြောင့် သွားဖြစ်အောင်သွားကြည့်လိုက်ပါလို့ တိုက်တွန်းပါရစေနော်။
🇬🇧 စကော့တလန်ပြည်နယ်ရဲ့ သမိုင်းဝင် အီဒင်ဘရာရဲတိုက် "Edinburgh Castle"
🇬🇧 မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ "Old Trafford" ဘောလုံးကွင်း
🇬🇧မန်ချက်စတာ မြို့ ရဲ့ အကြီးဆုံးဈေးဝယ်စင်တာကြီး "Trafford Mall"
🇬🇧"Stonehenge" လို့ခေါ်တဲ့ စက်ဝိုင်းပုံ ကျောက်တုံးကျောက်ဆိုင်ကြီးတွေ
🇬🇧ဝေလပြည်နယ် အတွင်း Cardiff Bay ရှိ "Wales Millennium Center" [ကဇာတ်ရုံ]
🇬🇧သမိုင်းဝင် အထင်ကရ အဆောက်အဦးအဖြစ် သတ်မှတ်ထားတဲ့ "Cradiff Castle" ရဲတိုက်
🇬🇧 ရောမသားတို့ ရေစိမ်ရာ သဘာဝ ရေပူစမ်းထွက်ရှိတဲ့ "Roman Bath"
🇬🇧စုံလင်တဲ့ Brand ပစ္စည်းများရောင်းချရာ "Bicester Village"
🇬🇧အောက်စဖို့ဒ် တက္တသိုလ် နဲ့ ဟယ်ရီပေါ်တာ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကွင်း "Harry Porter Great Hall"
🇬🇧King’s Collage အနောက်ဖက်ရှိ ကမ်မြစ်အတွင်း ဘုတ်စီးမည့်အစီစဉ် [River Punting
🇬🇧ကမ်းဘရစ်ခ်ျ တက္ကသိုလ် "Cambridge Collage"
🇬🇧ဝင်ဆာနန်းတော် "Windsor Castle"
🇬🇧 သိမ်းမြစ်အတွင်း အပျော်စီးသဘောင်္စီး အစီအစဉ် [Thames River
🇬🇧 ထောင်စုဘီးလို့ခေါ်တဲ့ "London Eye"
🇬🇧 လန်ဒန်မြို့ သင်္ကေတ တစ်ခုဖြစ်တဲ့ "Tower Bridge"
🇬🇧 ချားလ်စ်မင်းသားနဲ့ ဒိုင်ယာနာ လက်ထပ်ပွဲ ကျင်းပရာ ဘုရားရှိခိုးကျောင်း "Westminster Abbey", "Westminster Bridge"
🇬🇧 Big Ben နာရီစင် , နွေရာသီစံနန်းတော် - Buckingham Palace …. စသည်ဖြင့် နေရာစုံ ရောက်ရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ခုတော့ရှိတာပေါ့နော်.. ဗီဇာလေးတော့ လိုတာပေါ့လို့.. အဲ့ဒါလေးတော့ မဖြစ်မနေ လုပ်ဆောင်ရမှာမို့ စာရင်းလေး မြန်မြန်သွင်းဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။
ခရီးစဉ် အသေးစိတ်ကို Viber, Facebook ,Chat Box တို့မှလည်း ဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
🛎တိုးဒီ နဲ့ GO ပြီ။
📞ဖုန်း - 378503, 378127 , 250734, 371105 , 373270, 38121
📱 Viber / HP : 09779999147 ,
Tour De Myanmar Travels & Tour Co. Ltd. Tour De Myanmar Travels & Tour Co. Ltd. updated their cover photo.
21-25 June 2019💰USD 1090✈ Vietnam Airlines
အထူးပရိုမိုရှင်းတွေနဲ့ ကိုရီးယားခရီးစဉ်လာပါပြီ။ ၅ ရက်ခရီးစဉ်ကို အသွားအပြန် လေယာဉ်အပါအ၀င် တစ်ဦးကို USD 1090 သာကျသင့်မှာဖြစ်လို့ အရမ်းကို ဈေးသက်သာပါတယ်။ပွင့်လင်းရာသီလေးဖြစ်ပြီမို့ ခုချိန်မှာ ဆိုးလ်မြို့တော်ဟာ သွားရောက်လည်ပတ်ဖို့ အကောင်းဆုံး အချိန်ပါပဲနော်။
🇰🇷 အချစ်သင်္ကေတလို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဆိုးလ်တာဝါ
🇰🇷Winter Sonata ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ နာမိကျွန်း
🇰🇷 Everland Teme Park မှာ ပျော်ရွှင်စွာ ကစားမယ်
🇰🇷 ဂျောင်းဘုတ်ဂန်း နန်းတော်
🇰🇷 ကိုရီးယားလူငယ်တွေ Hangout လုပ်တဲ့ Gwanghwamun Square
🇰🇷အရမ်းလှတဲ့ မြို့လယ်ကစမ်းချောင်းလေး Cheonggye Stream🇰🇷 ဟန်းဘုတ်လို့ခေါ်တဲ့ ကိုရီးယား ၀တ်စုံလှလှလေးတွေ ၀တ်ဆင်ကြည့်ရမဲ့ အစီအစဉ်
🇰🇷 ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ လေ့လာရမဲ့ ကင်မ်ချီပြုလုပ်ပုံ အဆင့်ဆင့်
🇰🇷 ဈေးဝယ်ဖို့ အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ မြောင်ဒုံဈေး
🇰🇷 ဟန်မြစ်အတွင်းမှာ သဘောင်္စီးရတဲ့ အတွေ့အကြုံ စတဲ့ အစီအစဉ်ပေါင်းများစွာ ပါဝင်ပါတယ်။
💳အခြားသတင်းကောင်းလေး တစ်ခုကတော့ CB Bank ကနေ မြန်မာ ကျပ်ငွေနဲ့ Visa ကဒ်ရှိသူတိုင်း IPP လို့ ခေါ်တဲ့ Installment Payment Plan လေးရယူပြီး ၊ အရစ်ကျ ငွေပေးချေတဲ့ စနစ်ကို CB Bank ကနေ ရယူပြီး ခရီးစဉ်လေးလည်းလိုက်ပါနိုင်ပါတယ်။
ခရီးစဉ် အသေးစိတ်ကို Viber, Facebook Chat Box တို့မှလည်း ဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
ပြည်ပခရီးသွားလိုင်စင်အမှတ် - (ပခ-၀၀၁၂)
☎ဖုန်း - 01 378503, 378127, 250734, 371105, 381213, 373270
📲Viber :09777250050,09779999146,09779999147 ... See MoreSee Less